EMUI 10 Fanavaozana manerantany dia tonga any Huawei Mate 20 Lite | Androidsis
Fanavaozana manerantany Android 10 miorina amin'ny EMUI 10 Tonga amin'ny Huawei Mate 20 Lite ihany amin'ny farany
Huawei dia maharitra fotoana fohy hanaterana ny fanavaozana Android 10 miorina 10 EMUI amin'ireo fitaovana marobe. ny Mate 20 Lite io no iray amin'ireo terminal eo anelanelan'ny malaza indrindra amin'ny katalaoginy. Ity elanelan-tany ity dia ny endriny voapaingotra indrindra amin'ny sainam-pirenen'ny orinasa sinoa taona 2018.
Ny fonosana firmware izay manampy an'ity kinova farany ity dia nanomboka tonga tany Eropa sy ny tsena sasany tamin'ny Novambra tamin'ny taon-dasa ho an'ny finday. Nanomboka teo, firenena maro hafa - anisan'izany ireo latam- tsy nankafy ny vintana mitovy, fa ity dia zavatra miova misaotra Niparitaka manerantany niaraka tamin'ny EMUI 10 ny OTA, izay efa natomboka.
Ny fanavaozana vaovao ho an'ny Huawei Mate 20 Lite dia mitondra ny EMUI 10.0.0.172 sy EMUI 10.0.0.170 kinova, miankina amin'ny faritra. Ireo kinova roa ireo dia manana habe eo amin'ny 4GB eo ho eo.
Hanamarina raha efa manana ny fonosana firmware vaovao ianao, raha sendra mpampiasa an'io elanelam-potoana io ianao ary tsy nahazo azy teo aloha, mankanesa any Fikirana> Rafitra> Fanavaozana ny lozisialy> Zahao raha misy fanavaozana. Raha misy fanavaozana azo atao, dia hanontany anao raha te hampidina azy ianao. Raha tsy izany, azonao atao ny manokatra ny fampiharana HiCare> Fanavaozana> Zahao ireo fanavaozana.
Alohan'ny hanombohana ny fizotran'ny fampidinana sy ny fametrahana, izahay dia manoro hevitra ny fananana ny finday avo lenta mifandraika amin'ny tamba-jotra Wi-Fi maharitra sy haingam-pandeha, mba hialana amin'ny fanjifana ny angon-drakitra mpanome. Zava-dehibe koa ny fananana haavon'ny batterie tsara hisorohana ny mety tsy fanelingelenana mandritra ny fizotry ny fametrahana.
Lisitra vaovao: ireo no maodely Huawei mendrika ny kinova manerantany EMUI 10
Ny fanavaozana EMUI 10 dia manolotra zava-baovao maro sy fanatsarana interface isan-karazany. Ity sosona ity dia manome ny malama sy ny fanatsarana ny maodely Mate 20 Lite. Mazava ho azy, ny mampiavaka ny Android 10 dia tsy hita miharihary amin'ny tsy fisian'izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Fanavaozana manerantany Android 10 miorina amin'ny EMUI 10 Tonga amin'ny Huawei Mate 20 Lite ihany amin'ny farany